शनिबार, माघ १५ २०७८
# जित जङ्ग बस्नेत
नेपालमा आज थप चार हजार ६३६ कोरोना सङ्क्रमित थपिए,चार जनाको मृत्यु
शनिबार, माघ १ २०७८
काठमाडौँ, १ माघ-पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार ६३६ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज सार्वजनिक गरेको बुलेटिनमा १४ हजार ५५६ परीक्षण गर्दा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो । योसँगै सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २१ हजार ५८४ पुगेको छ ।
पछिल्लो समय थप ३५० जना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै सङ्क्रमणमुक्त हुनेको सङ्ख्या आठ लाख १६ हजार तीन पुगेको छ । सङ्क्रमणमुक्त हुनेदर ९६.१ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विगत २४ घण्टामा चार जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ । हालसम्म ११ हजार ६१७ जनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइसकेकोे छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ५०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्ला मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, भक्तपुर, कास्की र कैलाली रहेका छन् । यस्तै २०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका जिल्लामा झापा, धनुषा, मकवानपुर, काभ्रे, नवलपरासीपूर्व, बाँके र रुपन्देही रहेका छन् । नेपालमा सङ्क्रमणदर १७ प्रतिशत रहेको छ । हाल होमआइसोलेशनमा २० हजार ५३६, संस्थागत आइसोलेशनमा एक हजार ४८, आइसीयूमा ११९ र भेन्टिलेटरमा २६ जनाको उपचार भइरहेको छ ।
चार लाख बढीले लगाए खोप -विगत २४ घण्टामा चार लाख ३५ हजार १९३ जनाले खोप लगाएका छन् । हालसम्म पहिलो मात्रा एक करोड ५८ लाख १४ हजार ३८३ र पूर्णमात्रा एक करोड २० लाख ९९ हजार ८०५ जनाले लगाइसकेका छन् । (रासस)
फुङ्लिङमा बुष्टरडोज दिइने, बालबालिकालाई दाेस्राे खाेप
कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिए पनि छैन कुनै साबधानि
कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन गाउँ–गाउँमा घुम्ती शिविर
संवाद र सहमतिमै संसदको गतिरोध अन्त्य हुन्छ : प्रधानमन्त्री
जसरी उकालाे चढेथ्याे उसैगरी ओरालो लाग्यो कोरोना संक्रमणदर
पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा बन्दुक आक्रमणमा परी बाबु छोराको मृत्यु
सैफ पत्नि करिनाले लगाउँछिन् निकै सस्तो मूल्यको बिकिनी
बाग्मती छेउका अवैध संरचना सात दिनभित्र हटाउन निर्देशन
स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले ? सत्तागठबन्धनकाे बैठक आज पनि
कस्ताे छ आजकाे माैसम ? घाम लाग्न के गर्लान्…
आमिर खान पछि अब अनिल कपूरको डिर्भाेस गर्ने पालो…
दक्षिण भारतीय चलचित्र ‘थिरिमालीको गीत ‘रंग भिरंगी’मा यस्तो अबतारमा…
मङ्गलबारेमा पिकनिक हिडेका १८ वर्षीय अनुपले हुइँकाएको मोटरसाइकल २०…
वर्षौंपछि मलाइका अरोराको पीडा छचल्कियो , रुदै भनिन्– पुर्व…
जब प्रियंका चोपडा निकसँग सुत्न ओछ्यानमा जान्छिन् , यो…
contact at [email protected] or +1 (510) 417-9671